मनाङमा अड्किए भोलि विश्वासको मत लिने भनेका मुख्यमन्त्री पोखरेल, अब के हुन्छ ? - Reel Mandu
मनाङमा अड्किए भोलि विश्वासको मत लिने भनेका मुख्यमन्त्री पोखरेल, अब के हुन्छ ?
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मनाङमै रोकिएका छन् ।
चार दिनदेखि अविरल परेको बर्षासंगै आएको बाढी पहिरो गएर घरवारबिहिन भएका नागरिकलाई राहत लिएर मनाङ गएको मुख्यमन्त्री सहितको टोली खराब मौसमका कारण हेलीकप्टर उड्न नसक्दा मनाङमै रोकिएका हुन् ।
बिहीबार पोखराबाट राहत लिएर मुख्यमन्त्री पोखरेल, मन्त्री दीपक मनाङे, प्रदेश सांसद चिन्तबहादुर घलेलगायत नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा मनाङ गएका थिए । तर, अपरान्ह पोखरा फर्किने तयारी गरिरहेका बेला मौसम बिग्रिएपछि मुख्यमन्त्रीसहितको टोली उतै अड्किएको हो ।
मनाङमा अचानक मौसममा खराबी आएका कारण हेलिकप्टर उड्ने अवस्था नरहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री कुमार खड्काले बताए। ‘अहिले मनाङको मौसममा एक्कासि बदली भएकाले हेलिकप्टर उद्धारमा पनि खटिन सकेको छैन’, खड्काले भने, ‘प्रभु एयरको हेलिकप्टरमा मुख्यमन्त्री फर्कने योजना थियो, उक्त हेलिकप्टर पनि बगरछापमा ल्याण्ड भएको छ।’
राहत लिएर गएको टोलीलाई लिन पोखराबाट गएको प्रभु एयरको हेलिकोप्टर पनि मौसम खराब हुँदा मनाङको बगर छापमा ल्याण्ड गरेको पत्रकार प्रकाश ढकालले जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशसभामा शुक्रबार मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेल मनाङमा रोकिएपछि भोलिको प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम के हुने भन्ने जिज्ञासा उठेको छ ।
तर,गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले मौसम खुल्नासाथ पोखरा फर्किने, यदि कुनै हालतमा फर्कन नसकेको अवस्थामा कार्यसूची परिवर्तन गरेर पर्सिका लागि विश्वासको मत लिने ब्यवस्था मिलाउनका लागि प्रदेश सचिवालयलाई जानकारी गराएको बताए ।
चामेमा अहिले पनि सिमसिम पानी परिरहेको र बादलले आकाश ढाकेको स्थानीयले बताएका छन्। जसका कारण चामेमा रहेको नेपाली सेनाको हेलिकप्टर समेत उड्न सकेको छैन। मौसम खराब भएकै कारण प्रभु एयरको हेलिकप्टर चामे पुग्न नसकेको जनाएको छ। पोखरा फर्कने अवस्था नभएकाले मुख्यमन्त्री पोखरेलसहितको टोली आज चामेमै बास बस्ने भएका छन्।
नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले बिहीबार बिहान मनाङको सिरानतालका २४ जना र थोंचे गुम्बाबाट ११ जनाको उद्धार गरेको थियो। सेनाको त्यही हेलिकप्टरमा मुख्यमन्त्री पोखरेलसहितका टोली मनाङको बाढी र पहिरोग्रस्त क्षेत्रको निरीक्षण गर्न गएका थिए। मौसममा सुधार आउने अवस्था नभएकाले बिहीबार चामेमै बस्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ।
मनाङमा अड्किएका मुख्यमन्त्री पोखरेल शुक्रबार बिहानै आउने र सदनको कारबाही अघि बढ्ने सरकारका प्रवक्ता खड्काले बताए। संसदमा विश्वासको मत प्रस्ताव मुख्यमन्त्रीले नै पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
‘मुख्यमन्त्रीज्यू आउन सक्नुभएन भने विश्वास अर्को दिनको कार्यसूचीमा राखिन्छ’, प्रवक्ता खड्काले भने, ‘यसबारे संसद सचिवालयमा कुरा भइसकेको छ।’